Furo iPhone X ama wixii ka sareeya oo leh 3D madaxa la daabacay | Wararka IPhone
Kahor intaanan bilaabin faahfaahinta tijaabadan uu qaaday suxufiga Forbes, Thomas Brewster, kaas oo uu ina tusinayo natiijooyinka baadhitaan lagu qaaday aaladda aqoonsiga Face ID iyo aaladaha kale ee aan ka tirsanayn Apple ee sheeganaya inay adeegsadaan noocan amniga ah Waxaan dhihi doonaa markay tahay amniga, Apple wuxuu ka mid yahay kuwa had iyo jeer isbeddel keena. Hirgelinta Aqoonsiga Taabashada ayaa maskaxda ku soo dhacaysa, taas oo inkasta oo waa runtaa Apple may ahayn tii ugu horaysay ee fulisaWaxay ahayd tii ugu horreysay ee heshay heer ammaan heer sare ah marka loo eego shirkadaha intiisa kale.
Maanta waxa aan ku arki karno kuna raaxeysan karno iPhone-ka ayaa ah dareemaha wajiga ama sida Apple ugu yeerto Face ID, taxane dareemayaal ah oo si joogto ah loo tijaabinayo iyo in isla xariiqa hore loo soo sheegay ee Aqoonsiga Taabashada aysan aheyn kuwii ugu horeeyay ee fuliya waxay umuuqataa inay sifiican uqabteen. Maanta waan arki doonaa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu baahida badan dareemayaashaan taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan hubino haddii ay suurtagal tahay in lagu furo iPhone X ama ka sarreeya madaxa lagu abuuray 3D.
Isku day aalado badan oo leh aqoonsi wajiga ah
Waa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu baahida badan ee aan aragnay waana horey u sii ambaqaadnay in Apple ay qabatay shaqo aad u qurux badan oo leh aqoonsigeeda Face. Imtixaanka, waxaa Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 8, OnePlus, LG G7 ThinQ iyo iPhone X. Hadda waa inaan daawano oo kaliya fiidiyowga nala tusay tijaabada la qaaday waxaana kugula talinaynaa in dhammaan isticmaaleyaasha (haddii ay haystaan ​​iPhone leh Face ID) iyo inay daawadaan si loo ogaado heerka amniga ee Apple ku daro iPhone-kooda:
IPhone X waa midka kaliya ee awooda inuu aqoonsado in waxa isku dayaya inuu furo uusan aheyn qof, badanaa waxaan ku qiyaaseynaa indhaha iyo nidaamka weyn ee 30.000 dhibcaha dhibcaha ee ay u adeegsadaan nidaamka. IPhone X iyo LG ayaa ah kuwa ka dhigay waxa ugu dhib badan in lagu soo saaro saxafiga 3D, xaqiiqdii iPhone X ma furin. Imtixaannadu way cad yihiin oo natiijada la helay nalama yaabin maxaa yeelay nidaamkan aqoonsiga wajiga ee ka socda Apple runtii wuu fiican yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Ma awoodi doonaan inay furaan iPhone X ama ka sareeya madaxa daabacan ee 3D?
Ma qori kartid Daabac, foomka saxda ah waa la daabacay.
Dhammaan marka laga reebo iphone x iyo lg waa la furay, marka waxaad keydisaa 4 daqiiqo oo fiidiyoow ah, waad soo dhaweyneysaa 😉
Ku jawaab H. Flores
"La daabacay"? Waa la daabacayaa.
Jawaab Emilio Barberá
Mahadsanid Oscar, markii aan arkay cinwaanka maqaalka "la daabacay" Aad ayaan u argagaxay markaan arko waxa ku jira oo aan toos ugu aado faallooyinka!
Macluumaadka qof walba. Sida laga soo xigtay RAE labada foom (daabacan, daabacan) ayaa sax ah.
Sida loogu daro bogga internetka 'Safari' iOS